Habel a Bible Ka Ne Ho Asɛm no, Onyaa Onyankopɔn Mu Gyidi | Suasua Wɔn Gyidi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lithuanian Luo Malagasy Maltese Ndebele Ndonga Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
FA W’ADWENE bu Habel a ɔde ne nguan kɔ adidi wɔ bepɔw so. Ɔto n’ani hwɛ nohoa a, ohu sɛ biribi retwa yerɛwyerɛw. Ná otumi hu sɛ ogya nkrante bi retwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ wɔ Eden turo no kwan ano, na ɛmma obiara ntumi nkɔ mu. Ɛhɔ na bere bi na n’awofo te, nanso afei de, na awofo no ne wɔn mma nyinaa ntumi nkɔ hɔ bio. Fa w’ani bu sɛ saa anwummere no Habel gyina hɔ na mframa nam ne tiri ho hoohoo; afei ɔma n’ani so hwɛ soro dwen Ɔbɔadeɛ no ho. Asɛm no ne sɛ, Onyankopɔn ne nnipa ntam bɛyɛ yiye bio anaa? Ɛno ne ade a na ehia Habel paa.
Ɛnnɛ, Habel kasa kyerɛ wo. Ɔkasa a, wote? Ebia wobɛka sɛ biribi a ɛte saa ntumi nsi, efisɛ Adam ba a ɔto so abien yi wui nyɛ nnɛ. Ne nnompe adan dɔte bɛyɛ mfe 6,000 ni. Bible kyerɛ sɛ, sɛ obi wu a, “onnim biribiara.” (Ɔsɛnkafo 9:5, 10) Afei nso, Habel anom asɛm biara nni Bible mu. Ɛnde ɔyɛ dɛn kasa kyerɛ yɛn?
Onyankopɔn de honhom kaa ɔsomafo Paulo ma ɔkaa Habel ho asɛm sɛ: “Ɛnam ɛno so no, ɛwom sɛ wawu de, nanso ɔda so kasa.” (Hebrifo 11:4) Ɛnam dɛn so na Habel kasa? Ɛnam gyidi so. Habel ne onipa a odi kan a onyaa gyidi. Ɔkyerɛe sɛ ne gyidi no yɛ kɛse paa ma enti ɛnnɛ, abɛyɛ biribi a ɛkasa kyerɛ yɛn na yetumi hwɛ sua. Sɛ yɛhwɛ Habel suasua ne gyidi a, ɛbɛyɛ sɛ nea ɔte ase a ɔrekasa kyerɛ yɛn tẽẽ.
Nanso sɛnea Bible nka Habel ho nsɛm pii yi de, yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu ɔno ne ne gyidi ho asɛm? Ma yɛnhwɛ.
WƆWOO NO BERE A NNIPA NNƆƆSO WƆ WIASE
Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, ankyɛ na wɔwoo Habel. Akyiri yi, Yesu kaa Habel ho asɛm sɛ ɔtenaa ase fii “wiase asefi.” (Luka 11:50, 51) Wiase a Yesu kaa ho asɛm no, wohwɛ a, ɛkyerɛ nnipa a wɔwɔ anidaso sɛ wobenya ogye afi bɔne mu. Ɛwom, Habel ne onipa a ɔto so anan a ɔbaa wiase, nanso ɛbɛyɛ sɛ ɔno ne onipa a odi kan a Onyankopɔn buu no sɛ ɔfata ogye. * Biribiara kyerɛ sɛ Habel annya onipa pa biara anhwɛ no ansua no.
Ná nnipa baa wiase nkyɛe, nanso na awerɛhow abɛsɛn amansan kɔn mu. Adam ne Hawa a wɔwoo Habel no, ɛbɛyɛ sɛ na wosi pi si ta na wɔn ho nso yɛ fɛ, nanso wohui sɛ wɔahwe ase. Bere bi, na wɔyɛ pɛ, na na wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena ase daa. Nanso wɔtew atua tiaa Yehowa Nyankopɔn ma ɔpam wɔn fii Paradise fie a na ɛwɔ Eden turom hɔ no. Nea wɔpɛ na wɔde dii kan, na wɔannwen wɔn mma mpo ho, na ɛno nti pɛyɛ ne daa nkwa bɔɔ wɔn.—Genesis 2:15–3:24.
Bere a wɔpam Adam ne Hawa fii turom hɔ no, wohui sɛ asetena nna fam koraa. Nanso bere a wɔwoo wɔn ba a odi kan no, wɔtoo ne din Kain, anaa “Nea Wɔawo No,” na Hawa kae sɛ: “Yehowa aboa me ma mawo ɔbarima.” Ebetumi aba sɛ “aseni” a Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛba no nti na Hawa kaa saa. Saa “aseni” no na Yehowa kaa ne ho asɛm wɔ turom hɔ sɛ ɔbea bi bɛwo no ma da bi wasɛe owudifo a ɔdaadaa Adam ne Hawa no. (Genesis 3:15; 4:1) Bere a Hawa tee saa nkɔmhyɛ no, ebetumi aba sɛ ɔfaa no sɛ ɔno ne ɔbea no, na Kain nso ne “aseni” no anaa?
Sɛ saa adwene no baa ne tirim a, ɛnde na ɔredaadaa ne ho paa. Bere a Kain renyin no, sɛ Adam ne Hawa de saa adwene no hyɛɛ ɔno nso ne tirim a, ɛnde bɔne a wɔde woo no nti, yebetumi aka sɛ ɛbɛma wayɛ ahomaso. Akyiri yi Hawa woo babarima foforo, nanso ɔno de, wamma no din papa saa. Wɔtoo no din Habel, na ebetumi akyerɛ “Huhuw” anaa “Ahuhude.” (Genesis 4:2) Sɛ yɛhwɛ edin a wɔde too Habel no a, yehu sɛ ɛbɛyɛ sɛ na wobu Kain sɛ ɔbɛyɛ onipa titiriw akyɛn Habel, nanso yɛrentumi nsi no pi saa.
Ne nyinaa mu no, sɛnea awofo a wodi kan no yɛɛ wɔn mma no, awofo betumi asua nneɛma pii afi mu. Wopɛ sɛ wode w’anom asɛm ne wo nneyɛe ma wo mma yɛ ahantan na wɔyɛ akɛsesɛm ne pɛsɛmenkominya anaa? Anaasɛ wobɛkyerɛkyerɛ wɔn ama wɔadɔ Yehowa Nyankopɔn na wɔafa no adamfo? Nea ɛyɛ awerɛhow ne sɛ, awofo a wodi kan no antumi anyɛ wɔn asɛde. Nanso na anidaso wɔ hɔ ma wɔn mma.
Ebetumi aba sɛ Adam kyerɛɛ mmarimaa baanu no adwuma a wɔbɛyɛ de aboa abusua no. Kain bɛyɛɛ okuafo, na Habel nso bɛyɛɛ oguanhwɛfo.
Nanso Habel yɛɛ biribi a ɛho hia sen saa koraa. Obenyaa gyidi nkakrankakra, na ɛno ne suban pa a akyiri yi Paulo kaa ho asɛm no. Wo de dwen ho hwɛ. Ná obiara nni hɔ a Habel bɛhwɛ no asua no. Enti ɛyɛɛ dɛn na onyaa gyidi wɔ Yehowa Nyankopɔn mu? Hwɛ adanse akɛse abiɛsa a ɛno nti na ɛbɛyɛ sɛ onyaa saa gyidi no.
Ɛyɛ ampa, Yehowa domee asase ma efifii nsɔe ne nnɛnkyɛnse, enti na kuayɛ ayɛ den. Nanso asase no tumi bɔɔ aduan pii maa Habel ne n’abusua nyaa nea wobedi. Nnomaa ne mpataa ne mmoa a aka de, Onyankopɔn annome wɔn, na saa ara nso na wannome mmepɔw, atare, nsubɔnten ne ɛpo. Wannome ɔsoro mununkum, owia, ɔsram, ne nsoromma nso. Baabiara a Habel bɛhwɛ no, na ohu adanse pii a ɛkyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn a ɔbɔɔ nneɛma nyinaa no wɔ ɔdɔ, nyansa ne papayɛ a edi mũ. (Romafo 1:20) Saa nneɛma no a odwinnwen ho no maa ne gyidi yɛɛ den.
Habel nyaa adagyew dwen Onyankopɔn ho. Fa w’ani bu sɛ Habel rehwɛ ne nguan. Oguanhwɛfo adwuma de, nantew nko ara. Odi mmoa a wonni ahoɔden yi anim fa mmepɔw ne mmonkyemmɔnka mu kɔ baabi a obenya aduan ne nsu pii ne homebea pa ama wɔn; otumi de wɔn twa nsubɔnten mpo. Yɛhwɛ nneɛma a Onyankopɔn abɔ a, gyama nguan paa na wohia nnipa mmoa; wobɛka sɛ ɔhyɛɛ da bɔɔ wɔn sɛ onipa nhwɛ wɔn so na ɔmmɔ wɔn ho ban bere nyinaa. So Habel hui sɛ ɔno nso hia akwankyerɛ ne ahobammɔ fi obi a ɔwɔ tumi na onim nyansa sen nnipa koraa hɔ? Ɛbɛyɛ sɛ ɔbɔɔ saa nneɛma no ho mpae pii na ɛmaa ne gyidi kɔɔ so yɛɛ den.
Abɔde a Habel hui no ma onyaa adanse a edi mũ, na ɛma ɔkyerɛe sɛ ɔwɔ Ɔbɔadeɛ a ɔwɔ ɔdɔ no mu gyidi
Yehowa bɔhyɛ ahorow.
Nea ɛkɔɔ so wɔ Eden turom hɔ a ɛmaa wɔpam Adam ne Hawa fii hɔ no, ɛbɛyɛ sɛ wɔkaa ho asɛm kyerɛɛ wɔn mma no. Enti Habel nyaa nneɛma pii a obetumi adwennwen ho.
Yehowa kae sɛ wadome asase. Habel huu nsɔe ne nnɛnkyɛnse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn asɛm no aba mu. Yehowa san kae sɛ Hawa bɛte yaw wɔ nyinsɛn ne abawo mu. Bere a Habel maame rewo ne nuanom nkumaa no, ɛbɛyɛ sɛ Habel hui sɛ saa nsɛm no yɛ nokware. Yehowa ka too hɔ sɛ Hawa ani begyina ne kunu aboro so, na Adam nso bedi no so. Habel de n’ani huu saa awerɛhosɛm no. Habel hui sɛ Yehowa asɛm biara ba mu pɛpɛɛpɛ. Enti na Habel wɔ adanse a edi mũ a ɛbɛma wagye adi sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ a ɛfa “aseni” ho no, ɛbɛba mu ama da koro “aseni” no ayi bɔne a efii ase wɔ Eden no afi hɔ.—Genesis 3:15-19.
Habel annya onipa papa biara ansua no, nanso ɛnyɛ nnipa nko ara na na wɔwɔ asase so a Habel betumi ahwɛ wɔn asua wɔn. Bere a Yehowa pam Adam ne Hawa fii turom hɔ no, ɔhwɛ hui sɛ Adam ne Hawa ne wɔn mma no biara rennya kwan nwura asase so Paradise no mu. Yehowa de abɔfo a wɔwɔ dibea kɛse a wɔfrɛ wɔn kerubim, ne ogya nkrante a ɛretwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ kɔwɛn turo no kwan ano.—Genesis 3:24.
Fa w’ani bu sɛnea Habel bɛte nka ne mmofraberem bere a ohuu saa kerubim no. Ná wɔadan wɔn ho nnipa, na Habel hwɛ wɔn a, na obehu sɛ wɔwɔ tumi kɛse. Ná “nkrante” a asɔ gya na ɛretwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ no nso bɛbɔ no hu paa. Bere a Habel renyin no, wugye di sɛ ohui sɛ kerubim no abrɛbrɛ ma wɔafi baabi a wogyina no anaa? Dabi. Mmom, awia oo, anadwo oo, ohui sɛ abɔfo ahoɔdenfo a wɔwɔ adwene yi kuraa wɔn adwuma no mu mfe pii. Enti Habel hui sɛ Yehowa Nyankopɔn wɔ asomfo anokwafo a wɔyɛ adetrenee. Habel huu biribi wɔ saa kerubim no ho a wanhu wɔ n’awofo ho; ohui sɛ kerubim no yɛ anokwafo na wotie Yehowa. Nea ɛbɛyɛ biara, nea abɔfo no yɛe no bɛhyɛ ne gyidi den.
Habel asetena nyinaa, na obehu sɛ kerubim no yɛ Yehowa asomfo anokwafo a wotie n’asɛm
Yehowa ho nsɛm a ɔnam nneɛma a wabɔ, bɔhyɛ ahorow, ne nhwɛso a n’asomfo yɛe so yii no adi no, bere a Habel dwinnwen ho no, ne gyidi kɔɔ so yɛɛ den. Wunhu sɛ Habel nhwɛso no kasa kyerɛ yɛn? Nea Habel yɛe no kɔ ma mmofra paa. Sɛ abofra bi abusuafo nyɛ adepa mpo a, obetumi asua sɛ obenya Yehowa Nyankopɔn mu gyidi a edi mũ. Yɛwɔ nneɛma bebree a ebetumi ama yɛanya gyidi; ebi ne abɔde a ɛyɛ nwonwa, Bible mũ no nyinaa, ne gyidi ho nhwɛso pa a nkurɔfo pii ayɛ.
Bere a Habel renya gyidi kɛse wɔ Yehowa mu no, na ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi de kyerɛ saa gyidi no. Nanso asɛm no ne sɛ, onipa desani de, dɛn paa na obetumi ayɛ ama amansan nyinaa Bɔfo no? Ɛda adi pefee sɛ Onyankopɔn nhia akyɛde anaa mmoa biara mfi nnipa hɔ. Akyiri yi, Habel benyaa ntease bi a edi mũ. Ɛne sɛ, sɛ ɔhwɛ nea ɔwɔ na ɔde papa a ɛwom ma Yehowa a, bere dodow a efi ne komam no de, ne soro Agya no ani bɛsɔ.
Enti Habel yɛe sɛ ɔde ne nguan no bi bɛma no. Oyii ne mmoa no mu mmakan no bi, papa a ɛwom no, na ɔde n’afã a ɛsom bo paa no bɔɔ afɔre. Saa bere no ara nso, Kain boaboaa n’afuw mu nnuan ano sɛ ɔde rekɔbɔ afɔre ahwehwɛ Onyankopɔn anim dom. Nanso na emfi ne yam te sɛ Habel de no. Bere a anuanom baanu no de wɔn ayɛyɛde no kɔe no, nea ɛwɔ obiara koma bɛdaa adi.
Habel de gyidi na ɛbɔɔ afɔre; Kain de, wanyɛ saa
Ɛbɛyɛ sɛ Adam mmabarima baanu no nyinaa sɔɔ gya wɔ afɔremuka so bɔɔ afɔre no wɔ so, na ebetumi aba sɛ wɔbɔɔ afɔre no wɔ baabi a ɛbɛn kerubim no, efisɛ saa bere no, na kerubim no nkutoo ne Yehowa ananmusifo wɔ asase so. Yehowa de n’adwene kɔɔ wɔn afɔrebɔ no so. Yɛkenkan sɛ: “Yehowa ani sɔɔ Habel ne n’afɔre no.” (Genesis 4:4) Nea Onyankopɔn yɛ de kyerɛɛ anisɔ no de, Bible nka. Ɛnde dɛn na ɛmaa n’ani sɔɔ Habel?
Nea ɔde bɔɔ afɔre no na n’ani gyee ho anaa? Habel afɔrebɔde no, na ɛyɛ abɔde a ɛwɔ nkwa na ɛhome, na ohwiee ne mogya a ɛsom bo no gui. Wunnye nni sɛ ebia Habel hui sɛ afɔre a ɛte saa no bɛsom bo? Habel wu kɔe mfe pii no, Onyankopɔn kae sɛ nnipa mfa nguan a wɔn ho nni dɛm mmɔ afɔre. Ná saa nguan no gyina hɔ ma ne Ba a ɔyɛ pɛ a wɔfrɛ no “Onyankopɔn Guammaa” no; ɔno na na obehwie ne mogya agu ama yɛn. (Yohane 1:29; Exodus 12:5-7) Nanso ɛda adi sɛ na Habel nnim sɛnea Onyankopɔn de afɔrebɔ bedi dwuma daakye no ho hwee.
Nea yenim ne sɛ, Habel hwɛɛ nea ɔwɔ yii papa a ɛwom de bɔɔ afɔre. Ɛnyɛ afɔre no nko na Yehowa ani sɔe, na mmom n’ani sɔɔ Habel ankasa nso. Ná Habel dɔ Yehowa, na na ɔwɔ ne mu gyidi paa; ɛno na ɛkaa no ma ɔbɔɔ afɔre no.
Kain annya no saa. “Kain ne n’afɔre no de, [Yehowa] ani ansɔ.” (Genesis 4:5) Ɛnyɛ nneɛma a Kain de bɔɔ afɔre no ne asɛm no, efisɛ bere bi akyi no, Onyankopɔn Mmara maa kwan ma nnipa de afuw mu nnuan bɔɔ afɔre. (Leviticus 6:14, 15) Nanso Bible ka Kain ho asɛm sɛ, na “n’ankasa nnwuma yɛ bɔne.” (1 Yohane 3:12) Kain nyaa adwene bi a nnipa pii kura nnɛ; ɛyɛɛ no sɛ, sɛ onya yɛ biribi de kyerɛ sɛ ɔresom Onyankopɔn a, wawie. Ankyɛ koraa na ɔde ne nneyɛe kyerɛe sɛ onni Yehowa mu gyidi papa biara, na ɔnnɔ no nso.
Bere a Kain hui sɛ Yehowa ani ansɔ no no, osuaa biribi fii Habel hɔ anaa? Dabi. Ɔfaa ne nua no ho tan. Yehowa huu nea ɛrekɔ so wɔ Kain komam, na ɔtɔɔ ne bo ase ne no susuw asɛm no ho. Ɔka kyerɛɛ Kain sɛ ɔkwan a ɔnam so no de no bɛkɔ bɔne mu, na ɔma ohui sɛ, sɛ ɔsesa n’akwan a, n’anim bɛba “nyam.”—Genesis 4:6, 7.
Kain antie Onyankopɔn afotu no. Mmom no, ɔka kyerɛɛ ne nua kumaa a ne tirim fitaa no sɛ onkogya no afum. Woduu hɔ no, ɔtow hyɛɛ Habel so kum no. (Genesis 4:8) Enti yebetumi aka sɛ Habel bɛyɛɛ onipa a odi kan a wɔtan no wɔ ne som ho, na owuu mogyadansefo wu. Owui, nanso na asɛm no ntwae.
Ɔkwan bi so no, Habel mogya teɛɛm frɛɛ Yehowa Nyankopɔn hwehwɛɛ aweredi anaa atɛntrenee. Ampa ara Onyankopɔn maa atɛntrenee yɛɛ adwuma; ɔtwee Kain aso wɔ ne bɔne ho. (Genesis 4:9-12) Nanso nea ɛho hia paa ne sɛ, ɛnnɛ Habel gyidi ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no kasa kyerɛ yɛn. Habel nyaa bɛyɛ mfe ɔha, na sɛ yɛhwɛ mfe dodow a na ne bere sofo tumi di a, wannyin koraa, nanso nna a Habel dii wɔ asase so no, ɔde yɛɛ adepa. Ansa na ɔrewu no, na onim sɛ ne soro Agya Yehowa dɔ no na ogye no tom. (Hebrifo 11:4) Enti yenim paa sɛ Yehowa werɛ remfi no da, na Habel retwɛn sɛ ɔbɛsɔre afi awufo mu aba asase so paradise. (Yohane 5:28, 29) Wubehyia no wɔ hɔ anaa? Sɛ wusi wo bo sɛ wubetie Habel na woasuasua ne gyidi a, ɛnde wubehyia no.
^ nky. 8 Sɛ yɛka “wiase asefi” a, ebetumi akyerɛ aba a wogu anaa abawo; enti asɛm no fa nnipa a wodii kan woo wɔn ho. Ɛnde, adɛn nti na Kain a wodii kan woo no no, Yesu anka ne ho asɛm sɛ ɔtenaa ase fii “wiase asefi,” na Habel mmom na ɔkaa ne ho asɛm saa? Kain suban ne ne nneyɛe nyinaa kyerɛe sɛ ɔhyɛɛ da tew atua tiaa Yehowa Nyankopɔn. Sɛnea ɛtoo Kain awofo no, ɛte sɛ nea ɔno nso rennya owusɔre mpo na wɔagye no nkwa.
Suasua Habel Gyidi No